ဗေဒင် – Tamarmyay.com
အတိတ်ကံကိုအကြောင်းပြုပြီး ငွေအစုလိုက်အပုံလိုက်ရခြင်း၊ထီဆုကြီးပေါက်ခြင်း၊ခြံ၊ကား၊ကျောက် ကောင်းသောဝင်ခြင်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးမေတ္တာရေးကံကောင်းခြင်း၊မျက်နှာပွင့် စန်းပွင့်ခြင်း၊ငွေကြေးဥစ္စာပစ္စည်းများ စုဆောင်းတိုးပွားခြင်းတို့ကြုံရမည်။ မိမိမသိခဲ့သော အတိတ်ကံ အကောင်းအဆိုး နှစ်မျိုးစလုံး၏ အကျိုးကို တွေ့ကြုံခံစားရတတ်ပါတယ်။
အပျိုလူပျိုများ အတိတ်ဘ၀က ဆုတောင်းရှိခဲ့ဖူးသော အချစ်ဟောင်း အဆက်ဟောင်းများနှင့် ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ မိမိကိုစိတ်ဝင်စား ချစ်ကြိုက်နေသူများ အများအပြားပေါ်လာလိမ့်မည်။ မိမိချစ်သူ ၊ မိမိအိမ်ထောင်ဖက်၏ သ၀န်တိုခြင်းကို ခံရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ဖက်ကိုအကြောင်းပြု၍ ငွေကြေးစီးပွားဥစ္စာများ တိုးပွားမည်။
ဒီအချိန်မှာ မမျှော်လင့်ပဲ ရုတ်တရက် ငွေတွေ ဝင်လာမည်။ အမွေတွေ
ဘာတွေ ရစရာရှိရင် ရတတ်တာပေါ့။ ငွေလည်း စုဆောင်းမိနိုင်တာပေါ့။ တစ်ချိတည်း အပွကြံတာမျိုးတော့ မလုပ်နဲ့။ လုပ်ရင် မကောင်းဘူး။
ထီတွေ ဘာတွေလည်း ပေါက်တတ် ပါတယ်။ ဝါသနာပါရင် တနလာင်္နေ့ (၁၁)နာရီတိတိမှာ ရှေ့က (၇၇)နှစ်လုံးပူးတဲ့ ထီမျိုး ထိုးရမယ်။
အိမ်ထောင်ရှိတဲ့ လူများကတော့ သတိထားပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီကာလဟာ မျက်နှာပွင့်နေလို့ပဲ ဖြစ်တယ်။ လာဘ်လာဘလည်း အလွန်ရွှင်မယ်။ လူအနေနဲ့ကလည်း ဒီအချိန်မှာ အောင်မြင်တတ်ပါတယ်။
အလုပ်အတွက် စိတ်ညစ်စရာတွေ ပေါ်တတ်တယ်။ လခစားအလုပ်ဆို ဒီအချိန်မှာ ထွက်ချင်စိတ်ပေါက်တတ်တယ်။ မထွက်ပါနဲ့။ သားသမီးရှိရင် သားသမီးအတွက် စိတ်သောက ရောက်ရတတ်သည်။
မမျှော်လင့်ပဲ အိမ်မှာ အလှူလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ လုပ်တော့လည်း သေးသေးလုပ်မယ်ဆိုပြီး ကြီးသွားတတ်ပါတယ်။ ကောင်းပါတယ်။ ဆရာသမားလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိူး အိမ်ကို ရောက်လာပြီး ဒုက္ခ ပေးတတ်ပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ အရင့်အရင်က မသင့်မြတ်သူတွေနဲ့ ပြန်ပြီး သင့်မြတ်တတ်တယ်။ ဒါက ကောင်းတဲ့ အချက်ပါပဲ။ အတော့်ကို ကောင်းတဲ့နှစ်လို့ ဆိုရမယ်။ ဆင်းရဲမွဲတေနေသူတွေတောင် ဒီလိုအချိန်မှာ အိမ်ပိုင်၊ ကားပိုင်တွေ ဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ။
ခြေထောက်မှာ ဗွေပါတာမျိုးဆိုသလို မကြာခဏ ခရီးထွက်တာမျိုး ကြုံရမည်။ ရာထူးတွေ ဘာတွေလဲ ဒီအချိန်မှာ ရာထူးတတ်တာပဲကြုံကြုံ တစ်ခါတည်းနဲ့ မပြီးဘူး။ နှစ်ခါနှစ်ခေါက် ထပ်ပြီး ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောရှိနေတယ်။
အိမ်မှာ အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့ ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေးရှိရင်တော့ သတိထားပါဦး။ အိမ်က ထွက်တတ်တယ်။ အဖိုးမတန်ပါဘူးဆိုပြီး ဗူးထဲ၊ ခွက်ထဲမှာ ပစ်ထားတဲ့ ကျောက်ကလေးတစ်လုံး ရှိနေတယ်။ ဘာကျောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အရောင်ကတော့ ခပ်ဖျော့ဖျော့ပါပဲ။ ထိပ်နားမှာ အနာကလေးပါတယ်။ အဲဒီ ကျောက်ကလေးတစ်လုံး ရှာပြီး ငွေလက်စွပ်ကွင်းပြီး မိမိလက်မှာ ဝတ်ထားလိုက်ပါ။ အဲဒါ အလွန်ကောင်းတဲ့ အဆောင် ဖြစ်တယ်။
ဒီအချိန်မှာ မိမိအိမ်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည် ရောက်လာပြီး ညအိပ်ညနေ တည်းခိုးရင် ဒါမှမဟုတ် မိမိအိမ်မှာ နဂိုတည်းက ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည် ရှိနေခဲ့ရင် ထီဆုကြီးပေါက်တတ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေး ညံ့နေမည်။ ဂရုစိုက်ပါ။ ဦးခေါင်းနဲ့ ဝမ်းဗိုက် ဒုက္ခ ပေးတတ်ပါတယ်။ ခေါင်းမူး ဗိုက်အောင့် ဝမ်းသွား ရောဂါတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲ့သလိုမျိုး ကျန်းမာရေး ညံ့ခဲ့ရင် အုန်းရည် (၄)ခွက်နဲ့ လှေကားကို ပက်ပြီး ခြေဆေးပစ်ပါ။ အ့ာတြာကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေဘက်လုပ်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
ငယ်ရွယ်သူများအနေနဲ့ အချစ်ရေးမှာ ကြည်နူးဝမ်းသာစရာလေးတွေ ကြုံရမည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအချိန်မှာ ကံကောင်းတယ် ဆိုပေမယ့် မပြောပလောက်တဲ့ အညံ့အခိုက်လေးတွေ ရှိတာပေါ့။
အဲဒါတွေ ပြေပျောက်သွားအောင် ယတြာတော့လိုမယ်။ ဒီတော့ သင့်အနေနဲ့ ယတြာလေးတွေ ချေပေးပါဦး။
အမွှေးနံ့သာရေတွေနဲ့ တနင်္လာ ထောင့်က ဆင်းထုတော်ကို တနင်္လာနေ့မှာ ရေသပ္ပါယ်ပေးပါ။ ငွေပန်း(၂)ပွင့်၊ သစ္စာပန်း(၆)ပွင့်ကိုလည်း အဲဒီ ဘုရားမှာပဲ ကပ်လှူပူဇော်ဆုတောင်းပါ။ နဂါးရုံ ဘုရားမှာ ထန်းလျက် (၁၁)ခဲကို သတင်းစာစက္ကုကတော့ထဲ ထည့်ပြီး ကပ်လှူပူဇော်ဆုတောင်းပါက အခက်အခဲများ ပြေပျောက်၍ ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများ ပြည့်ဝလာပါလိမ့်မည်။
ယတြာ။ ။မည်သည့်နေ့တွင်မဆို မနက်(၇)နာရီ(၆)မိနစ်တိတိတွင် နှင်းဆီ(၇)ပွင့်၊သပြေ(၆)ညွန့်၊ဆီအစိမ်းဆမ်းထား
သော ဆွမ်းပူပူ(၃)ပန်းကန် ကို မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် မကြာခဏ လှူဒါန်းဆုတောင်းခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်တာလုံး အခိုက်အညံ့များ ကင်းစင်ကြေပျောက်ပြီး အကြံအစည်များအောင်မြင်လာပါလိမ့်မည်။
အတိတျကံကိုအကွောငျးပွုပွီး ငှအေစုလိုကျအပုံလိုကျရခွငျး၊ထီဆုကွီးပေါကျခွငျး၊ခွံ၊ကား၊ကြောကျ ကောငျးသောဝငျခွငျး ဖွဈတတျပါတယျ။ အခဈြရေးမတ်ေတာရေးကံကောငျးခွငျး၊မကျြနှာပှငျ့ စနျးပှငျ့ခွငျး၊ငှကွေေးဥစ်စာပစ်စညျးမြား စုဆောငျးတိုးပှားခွငျးတို့ကွုံရမညျ။ မိမိမသိခဲ့သော အတိတျကံ အကောငျးအဆိုး နှဈမြိုးစလုံး၏ အကြိုးကို တှကွေုံ့ခံစားရတတျပါတယျ။
အပြိုလူပြိုမြား အတိတျဘဝက ဆုတောငျးရှိခဲ့ဖူးသော အခဈြဟောငျး အဆကျဟောငျးမြားနှငျ့ ပွနျလညျဆုံတှရေ့တတျပါတယျ။ မိမိကိုစိတျဝငျစား ခဈြကွိုကျနသေူမြား အမြားအပွားပျေါလာလိမျ့မညျ။ မိမိခဈြသူ ၊ မိမိအိမျထောငျဖကျ၏ သဝနျတိုခွငျးကို ခံရတတျသညျ။ အိမျထောငျဖကျကိုအကွောငျးပွု၍ ငှကွေေးစီးပှားဥစ်စာမြား တိုးပှားမညျ။
ဒီအခြိနျမှာ မမြှျောလငျ့ပဲ ရုတျတရကျ ငှတှေေ ဝငျလာမညျ။ အမှတှေေ
ဘာတှေ ရစရာရှိရငျ ရတတျတာပေါ့။ ငှလေညျး စုဆောငျးမိနိုငျတာပေါ့။ တဈခြိတညျး အပှကွံတာမြိုးတော့ မလုပျနဲ့။ လုပျရငျ မကောငျးဘူး။
ထီတှေ ဘာတှလေညျး ပေါကျတတျ ပါတယျ။ ဝါသနာပါရငျ တနလာင်္နေ့ (၁၁)နာရီတိတိမှာ ရှကေ့ (၇၇)နှဈလုံးပူးတဲ့ ထီမြိုး ထိုးရမယျ။
အိမျထောငျရှိတဲ့ လူမြားကတော့ သတိထားပါ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ဒီကာလဟာ မကျြနှာပှငျ့နလေို့ပဲ ဖွဈတယျ။ လာဘျလာဘလညျး အလှနျရှငျမယျ။ လူအနနေဲ့ကလညျး ဒီအခြိနျမှာ အောငျမွငျတတျပါတယျ။
အလုပျအတှကျ စိတျညဈစရာတှေ ပျေါတတျတယျ။ လခစားအလုပျဆို ဒီအခြိနျမှာ ထှကျခငျြစိတျပေါကျတတျတယျ။ မထှကျပါနဲ့။ သားသမီးရှိရငျ သားသမီးအတှကျ စိတျသောက ရောကျရတတျသညျ။
မမြှျောလငျ့ပဲ အိမျမှာ အလှူလုပျဖွဈလိမျ့မယျ။ လုပျတော့လညျး သေးသေးလုပျမယျဆိုပွီး ကွီးသှားတတျပါတယျ။ ကောငျးပါတယျ။ ဆရာသမားလိုပုဂ်ဂိုလျမြိူး အိမျကို ရောကျလာပွီး ဒုက်ခ ပေးတတျပါတယျ။
ဒီအခြိနျမှာ အရငျ့အရငျက မသငျ့မွတျသူတှနေဲ့ ပွနျပွီး သငျ့မွတျတတျတယျ။ ဒါက ကောငျးတဲ့ အခကျြပါပဲ။ အတေျာ့ကို ကောငျးတဲ့နှဈလို့ ဆိုရမယျ။ ဆငျးရဲမှဲတနေသေူတှတေောငျ ဒီလိုအခြိနျမှာ အိမျပိုငျ၊ ကားပိုငျတှေ ဖွဈသှားတော့တာပါပဲ။
ခွထေောကျမှာ ဗှပေါတာမြိုးဆိုသလို မကွာခဏ ခရီးထှကျတာမြိုး ကွုံရမညျ။ ရာထူးတှေ ဘာတှလေဲ ဒီအခြိနျမှာ ရာထူးတတျတာပဲကွုံကွုံ တဈခါတညျးနဲ့ မပွီးဘူး။ နှဈခါနှဈခေါကျ ထပျပွီး ဖွဈတတျတဲ့ သဘောရှိနတေယျ။
အိမျမှာ အရှယျရောကျပွီးတဲ့ ယောကျြားလေး၊ မိနျးကလေးရှိရငျတော့ သတိထားပါဦး။ အိမျက ထှကျတတျတယျ။ အဖိုးမတနျပါဘူးဆိုပွီး ဗူးထဲ၊ ခှကျထဲမှာ ပဈထားတဲ့ ကြောကျကလေးတဈလုံး ရှိနတေယျ။ ဘာကြောကျပဲဖွဈဖွဈ အရောငျကတော့ ခပျဖြော့ဖြော့ပါပဲ။ ထိပျနားမှာ အနာကလေးပါတယျ။ အဲဒီ ကြောကျကလေးတဈလုံး ရှာပွီး ငှလေကျစှပျကှငျးပွီး မိမိလကျမှာ ဝတျထားလိုကျပါ။ အဲဒါ အလှနျကောငျးတဲ့ အဆောငျ ဖွဈတယျ။
ဒီအခြိနျမှာ မိမိအိမျမှာ ကိုယျဝနျဆောငျသညျ ရောကျလာပွီး ညအိပျညနေ တညျးခိုးရငျ ဒါမှမဟုတျ မိမိအိမျမှာ နဂိုတညျးက ကိုယျဝနျဆောငျသညျ ရှိနခေဲ့ရငျ ထီဆုကွီးပေါကျတတျပါတယျ။
ကနျြးမာရေး ညံ့နမေညျ။ ဂရုစိုကျပါ။ ဦးခေါငျးနဲ့ ဝမျးဗိုကျ ဒုက်ခ ပေးတတျပါတယျ။ ခေါငျးမူး ဗိုကျအောငျ့ ဝမျးသှား ရောဂါတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။ အဲ့သလိုမြိုး ကနျြးမာရေး ညံ့ခဲ့ရငျ အုနျးရညျ (၄)ခှကျနဲ့ လှကေားကို ပကျပွီး ခွဆေေးပဈပါ။ အ့ာတွာကို ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ ညနဘေကျလုပျရငျ ပိုကောငျးပါတယျ။
ငယျရှယျသူမြားအနနေဲ့ အခဈြရေးမှာ ကွညျနူးဝမျးသာစရာလေးတှေ ကွုံရမညျ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ ဒီအခြိနျမှာ ကံကောငျးတယျ ဆိုပမေယျ့ မပွောပလောကျတဲ့ အညံ့အခိုကျလေးတှေ ရှိတာပေါ့။
အဲဒါတှေ ပွပြေောကျသှားအောငျ ယတွာတော့လိုမယျ။ ဒီတော့ သငျ့အနနေဲ့ ယတွာလေးတှေ ခပြေေးပါဦး။
အမှေးနံ့သာရတှေနေဲ့ တနင်ျလာ ထောငျ့က ဆငျးထုတျောကို တနင်ျလာနမှေ့ာ ရသေပ်ပါယျပေးပါ။ ငှပေနျး(၂)ပှငျ့၊ သစ်စာပနျး(၆)ပှငျ့ကိုလညျး အဲဒီ ဘုရားမှာပဲ ကပျလှူပူဇျောဆုတောငျးပါ။ နဂါးရုံ ဘုရားမှာ ထနျးလကျြ (၁၁)ခဲကို သတငျးစာစက်ကုကတော့ထဲ ထညျ့ပွီး ကပျလှူပူဇျောဆုတောငျးပါက အခကျအခဲမြား ပွပြေောကျ၍ ကောငျးကြိုးလိုရာဆန်ဒမြား ပွညျ့ဝလာပါလိမျ့မညျ။
ယတွာ။ ။မညျသညျ့နတှေ့ငျမဆို မနကျ(၇)နာရီ(၆)မိနဈတိတိတှငျ နှငျးဆီ(၇)ပှငျ့၊သပွေ(၆)ညှနျ့၊ဆီအစိမျးဆမျးထား
သော ဆှမျးပူပူ(၃)ပနျးကနျ ကို မိမိနအေိမျဘုရားတှငျ မကွာခဏ လှူဒါနျးဆုတောငျးခွငျးဖွငျ့ တဈနှဈတာလုံး အခိုကျအညံ့မြား ကငျးစငျကွပြေောကျပွီး အကွံအစညျမြားအောငျမွငျလာပါလိမျ့မညျ။
Author admin adminPosted on March 20, 2018 Categories ဗေဒင်Leaveacomment on ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအားလုံးတွက် (၁)နှစ်စာအထူးဟောစတမ်းကြီး
ဆရာစံ-ဇာဏီ ဘို ၏ တစ် ပတ် စာဟော စာ တမ်း
၂၀.၃.၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၂၇.၃. ၂၀၁၈ ရက်နေ့ အထိ ဆရာစံဇာဏီဘို၏ တစ်ပတ်စာ ဟောကိန်းများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ယတြာချေနည်းလေးတွေနဲ့ ကံကောင်းစေမဲ့ အရောင်တွေလည်း ပါဝင်တာကြောင့် အားလုံးပဲ ကံကောင်းကြပါစေနော်။
တနင်္ဂနွေနေ့ မွေးသူတွေ ရပ်တန့်ထားတဲ့ အလုပ်တွေ စတင် အောင်မြင်မယ်။ ခရီးကိစ္စ အဆင်ပြေမယ်။လူမျိုးကွဲ အကျိုးပေးမယ်။အရပ်ဝေးနဲ့ ဆက်သွယ် လုပ်တဲ့ အလုပ်တွေ အောင်မြင်မယ်။ ကံကောင်းမှုတွေ ကြုံမယ်။ငွေကြေးကံကောင်းမယ်။ရန်အတိုက်အခံ အနည်းငယ် ရှိတယ်။ပြောသမျှ၊ လုပ်သမျှ အောင်မြင်မယ်။တနင်္ဂနွေ၊ သောကြာ၊ စနေ နေ့ မွေးသူများ ကောင်းကျိုးပေးပြီး တနင်္လာနေ့၊ ကြာသာပတေးနေ့ မွေးသူများကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မယ်။
ကံကောင်းစေမယ့် ဂဏန်း – ၂၊ ၇၊ ၉
ကံကောင်းစေတဲ့ အရောင် – အဖြူ၊ အစိမ်း၊ မီးခိုးရောင်
ယတြာ – အိမ်အနီးအပါးမှာ ရှိတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ သစ်သီး လှူဒါန်းပါ။
တနင်္လာနေ့မွေးသူတွေက အရာရာ အဆင်ပြေစေမယ့် ကာလဖြစ်တယ်။အခက်အခဲများကို ကျော်လွှားနိုင်မယ်။ငွေကြေး၊ လုပ်ငန်း ကဏ္ဍ ကံကောင်းမယ်။အကျိုးပေးခြင်းနဲ့ တိုးတက်ခြင်းများ ရှိမယ်။ကံ အခွင့်အရေး ကောင်းတွေ ရှိမယ်။ရန်အတိုက်အခံနဲ့တော့ ထိပ်တိုက် တွေ့နိုင်တယ်။ထင်ရှားတဲ့ အောင်မြင်မှုမျိုး ရနိုင်တယ်။တနင်္လာ၊ သောကြာနေ့ မွေးသူများကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်မယ်။ကြာသာပတေး၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ အင်္ဂါနေ့ မွေးသူများကြောင့် ကောင်းကျိုးများ ရနိုင်တယ်။
ကံကောင်းစေမယ့် ဂဏန်း – ၃၊ ၇၊ ၉
ကံကောင်းစေတဲ့ အရောင် – အပြာ၊ အနီ၊ ကြက်သွေးရောင်
ယတြာ – အနီရောင်ပန်း မကြာခဏ ဘုရားကပ်လှူပါ။
အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေ အနေနဲ့ကတော့ အရေးပါတဲ့ ဘ၀ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိမယ်။အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်ရမယ်။ အရပ်ဝေးနဲ့ ဆက်သွယ်တဲ့ ကိစ္စတွေ အကျိုးပေးမယ်။နိုင်ငံရပ်ခြားနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်မယ်။ပြောရေးဆိုရေး လုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်မယ်။ကံအပြောင်းအလဲနဲ့ တက်လမ်းပေါ်မယ်။လူမျိုးကွဲ အကျိုးပေးမယ်။ကံကောင်းတဲ့ ကာလ ဖြစ်တယ်။
တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ အင်္ဂါနေ့ မွေးသူများကြောင့် ကောင်းကျိုးများ ရရှိပြီး ကြာသာပတေးနေ့ မွေးသူများကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မယ်။ တနင်္ဂနွေ၊ စနေ မွေးသူများကြောင့်လည်း ပြသနာ ဖြစ်တတ်တယ်။
ကံကောင်းစေမယ့် ဂဏန်း – ၁၊ ၇၊ ၉
ကံကောင်းစေတဲ့ အရောင် – အပြာရောင်၊ အဝါရောင်၊ မီးခိုးရောင်။
ယတြာ – အဝါရောင် ပန်းပွင့် ဘုရားကပ်လှူခြင်း မကြာခဏ ပြုပေးပါ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မွေးသူတွေအတွက် မေတ္တာရေး ကံကောင်းမယ်။စိတ်ချမ်းမြေ့မယ်။အလှူ မင်္ဂလာကိစ္စတွေ ကြုံတွေ့ရမယ်။အရပ်ဝေးနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး လုပ်တဲ့ အလုပ်တွေ အကျိုးပေးမယ်။လာလ်လာဘ တိုးတက်ခြင်းမျိုး ရှိတယ်။ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ရှေ့တိုးလုပ်ကိုင်တဲ့ အလုပ်တွေ ကောင်းမယ်။သံယောစဉ် မထားသင့်သူကို သံယောစဉ် ထားမိတာကြောင့် စိတ်ပင်ပန်းမယ်။တနင်္လာ၊ သောကြာ၊ အင်္ဂါနေ့ မွေးသူများနှင့် ပူးတွဲလုပ်ရင် အကျိုးပေးတယ်။ကြာသာပတေး၊ စနေနေ့ မွေးသူများကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မယ်။
ကံကောင်းစေမယ့် ဂဏန်း – ၁၊ ၅၊ ၉
ကံကောင်းစေတဲ့ အရောင် – အပြာရောင်၊ အနီရောင်၊ ကြက်သွေးရောင်။
ယတြာ – သပြေညွှန့် ဘုရားကပ်လှူခြင်း မကြာခဏ ပြုပေးပါ။
ရာဟုမွေးသူတွေ အတွက်က ယှဉ်ပြိုင်မှု မှန်သမျှ အောင်မြင်မယ်။ပညာ၊ လုပ်ငန်း တွဲဖက် အောင်မြင်မယ်။အလုပ်ပို၊ ကိစ္စ ပိုတွေ ကြုံပြီး အောင်မြင်မှုရဲ့ အနှစ်သာရကို ရရှိမယ်။အထူးကံကောင်းတဲ့ ကာလဖြစ်မယ်။ဆန်းပွင့်မယ်။မိတ်ဆွေကောင်း အထောက်အကူ ရမယ်။ခရီးကံကောင်းမယ်။အရပ်ဝေးနဲ့ ဆက်သွယ်ရမယ်။မတော်တဆ ဖြစ်ခြင်းကိုတော့ ဂရုစိုက်ပါ။တနင်္လာ၊ သောကြာ၊ စနေ နေ့ မွေးသူများကြောင့် ကောင်းကျိုးများ ရမယ်။တနင်္ဂနွေ၊ ဗုဒ္ဓဟူး မွေးသူများကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ကြုံနိုင်တယ်။
ကံကောင်းစေမယ့် ဂဏန်း – ၁၊ ၄၊ ၉
ကံကောင်းစေတဲ့ အရောင် – အညိုရောင်၊ အပြာရောင်၊ မီးခိုးရောင်
ယတြာ – အဝါရောင်ပန်းပွင့် မကြာခဏ ကပ်လှူ ပူဇော်ပါ။
ကြာသာပတေး သားသမီးများအတွက်ကတော့ ထူးခြားတဲ့ အပြောင်းအလဲနဲ့ တက်လမ်းများပေါ်မယ်။သူတစ်ပါးထက် သာအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ အရည်အသွေး ပေါ်ထွက်နေတယ်။ကိုယ်ပိုင် လုပ်ကိုင်ခြင်းရဲ့ အနှစ်သာရ ကို ရရှိမယ်။ ကံ မြင့်မား လာမယ်။ကတိပေးတာ သတိထားပါ။ကတိ မတည်သူတွေနဲ့ တွေ့တတ်တယ်။မှန်းတာနဲ့ လက်တွေ့ အနည်းငယ် ကွာဟ နေမယ်။ လူမျိုးကွဲ အကျိုးပေးမယ်။
ကံကောင်းစေမယ့် ဂဏန်း – ၂၊ ၄၊ ၉
ကံကောင်းစေတဲ့ အရောင် – အညိုရောင်
ယတြာ – အညိုရောင် ပစ္စည်းတစ်ခု လူနဲ့ ဆောင်ပါ။
သောကြာနေ့ မွေးသူတွေ အနေနဲ့ကတော့ တစ်ပတ်တာ ကာလ အတွင်း ကောင်းသော အပြောင်းအလဲနဲ့ တိုးတက်မှုတွေ ရှိမယ်။လူမျိုးကွဲ အကျိုးပေးတယ်။အရပ်ဝေးနဲ့ တွဲဖက်ပြီး လုပ်ကိုင်ရတာတွေ အောင်မြင်မယ်။အမေ၊ အဖွား၊ အဒေါ် ကျန်းမာရေး ချူခြာမယ်။ဥစ္စာဓန တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနဲ့ ကြုံမယ်။လုပ်စရာ ရှိတာ ရဲရဲတင်းတင်း ရှေ့တိုးလို့ ကောင်းတယ်။ငွေကြေး ကံကောင်းမယ်။ရန်အတိုက်အခံ ရှိမယ်။ကြာသာပတေး၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေ နေ့ မွေးသူများ ကောင်းကျိုးပေးပြီး တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာနေ့ မွေးသူများကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်များ ရမယ်။
ကံကောင်းစေတဲ့ အရောင် – အစိမ်းရောင်၊ အဖြူရောင်၊ မီးခိုးရောင်
ယတြာ – သစ်ရွက်စိမ်း တစ်ရွက် အမွှေးနံ့သာဖျန်းပြီး ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ ထည့်ဆောင်ပါ။
စနေနေ့ မွေးသူတွေ အနေနဲ့ကတော့ ရန်များမယ်။ပြသနာများမယ်။မူလ စီစဉ်နေတာနဲ့ ကွာဟမယ်။ပြီးမှ လမ်းသစ်ထွင်ပြီး အဆင်ပြေသွားမယ်။သူတစ်ပါးကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေမှာ အခက်အခဲတွေ ကြုံမယ်။ရန် အတိုက်အခံ ရှိမယ်။ပုံမှန်ထက် ပိုပြီး ငွေဝင်တာမျိုး ရှိမယ်။ကြာသာပတေး၊ သောကြာ၊ စနေနေ့ မွေးသူများကြောင့် ကောင်းကျိုးများ ရရှိပြီး အင်္ဂါနေ့၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မွေးသူများကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်တတ်တယ်။
ကံကောင်းစေမယ့် ဂဏန်း – ၅၊ ၇၊ ၉
ကံကောင်းစေတဲ့ အရောင် – အနီရောင်၊ အပြာရောင်၊ မီးခိုးရောင်။
ယတြာ – အနီရောင် ပန်းပွင့် ကပ်လှူခြင်း မကြာခဏ ပြုလုပ်ပါ။
ဆရာစံ-ဇာဏီ ဘို ၏ တဈ ပတျ စာဟော စာ တမျး
၂၀.၃.၂၀၁၈ ရကျနမှေ့ ၂၇.၃. ၂၀၁၈ ရကျနေ့ အထိ ဆရာစံဇာဏီဘို၏ တဈပတျစာ ဟောကိနျးမြားကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ယတွာခနြေညျးလေးတှနေဲ့ ကံကောငျးစမေဲ့ အရောငျတှလေညျး ပါဝငျတာကွောငျ့ အားလုံးပဲ ကံကောငျးကွပါစနေျော။
တနင်ျဂနှနေေ့ မှေးသူတှေ ရပျတနျ့ထားတဲ့ အလုပျတှေ စတငျ အောငျမွငျမယျ။ ခရီးကိစ်စ အဆငျပွမေယျ။လူမြိုးကှဲ အကြိုးပေးမယျ။အရပျဝေးနဲ့ ဆကျသှယျ လုပျတဲ့ အလုပျတှေ အောငျမွငျမယျ။ ကံကောငျးမှုတှေ ကွုံမယျ။ငှကွေေးကံကောငျးမယျ။ရနျအတိုကျအခံ အနညျးငယျ ရှိတယျ။ပွောသမြှ၊ လုပျသမြှ အောငျမွငျမယျ။တနင်ျဂနှေ၊ သောကွာ၊ စနေ နေ့ မှေးသူမြား ကောငျးကြိုးပေးပွီး တနင်ျလာနေ့၊ ကွာသာပတေးနေ့ မှေးသူမြားကွောငျ့ စိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈမယျ။
ကံကောငျးစမေယျ့ ဂဏနျး – ၂၊ ၇၊ ၉
ကံကောငျးစတေဲ့ အရောငျ – အဖွူ၊ အစိမျး၊ မီးခိုးရောငျ
ယတွာ – အိမျအနီးအပါးမှာ ရှိတဲ့ ဘုနျးတျောကွီးကြောငျးမှာ သဈသီး လှူဒါနျးပါ။
တနင်ျလာနမှေ့ေးသူတှကေ အရာရာ အဆငျပွစေမေယျ့ ကာလဖွဈတယျ။အခကျအခဲမြားကို ကြျောလှားနိုငျမယျ။ငှကွေေး၊ လုပျငနျး ကဏ်ဍ ကံကောငျးမယျ။အကြိုးပေးခွငျးနဲ့ တိုးတကျခွငျးမြား ရှိမယျ။ကံ အခှငျ့အရေး ကောငျးတှေ ရှိမယျ။ရနျအတိုကျအခံနဲ့တော့ ထိပျတိုကျ တှနေို့ငျတယျ။ထငျရှားတဲ့ အောငျမွငျမှုမြိုး ရနိုငျတယျ။တနင်ျလာ၊ သောကွာနေ့ မှေးသူမြားကွောငျ့ စိတျအနှောငျ့အယှကျ ဖွဈမယျ။ကွာသာပတေး၊ ဗုဒ်ဓဟူး၊ အင်ျဂါနေ့ မှေးသူမြားကွောငျ့ ကောငျးကြိုးမြား ရနိုငျတယျ။
ကံကောငျးစမေယျ့ ဂဏနျး – ၃၊ ၇၊ ၉
ကံကောငျးစတေဲ့ အရောငျ – အပွာ၊ အနီ၊ ကွကျသှေးရောငျ
ယတွာ – အနီရောငျပနျး မကွာခဏ ဘုရားကပျလှူပါ။
အင်ျဂါနမှေ့ေးသူတှေ အနနေဲ့ကတော့ အရေးပါတဲ့ ဘ၀ တိုးတကျပွောငျးလဲမှုတှေ ရှိမယျ။အရေးကွီးတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှေ ခမြှတျရမယျ။ အရပျဝေးနဲ့ ဆကျသှယျတဲ့ ကိစ်စတှေ အကြိုးပေးမယျ။နိုငျငံရပျခွားနဲ့ ဆကျစပျတဲ့ လုပျငနျးတှေ အောငျမွငျမယျ။ပွောရေးဆိုရေး လုပျငနျးတှေ အောငျမွငျမယျ။ကံအပွောငျးအလဲနဲ့ တကျလမျးပျေါမယျ။လူမြိုးကှဲ အကြိုးပေးမယျ။ကံကောငျးတဲ့ ကာလ ဖွဈတယျ။
တနင်ျလာ၊ ဗုဒ်ဓဟူး၊ အင်ျဂါနေ့ မှေးသူမြားကွောငျ့ ကောငျးကြိုးမြား ရရှိပွီး ကွာသာပတေးနေ့ မှေးသူမြားကွောငျ့ စိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈမယျ။ တနင်ျဂနှေ၊ စနေ မှေးသူမြားကွောငျ့လညျး ပွသနာ ဖွဈတတျတယျ။
ကံကောငျးစမေယျ့ ဂဏနျး – ၁၊ ၇၊ ၉
ကံကောငျးစတေဲ့ အရောငျ – အပွာရောငျ၊ အဝါရောငျ၊ မီးခိုးရောငျ။
ယတွာ – အဝါရောငျ ပနျးပှငျ့ ဘုရားကပျလှူခွငျး မကွာခဏ ပွုပေးပါ။
ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ မှေးသူတှအေတှကျ မတ်ေတာရေး ကံကောငျးမယျ။စိတျခမျြးမွမေ့ယျ။အလှူ မင်ျဂလာကိစ်စတှေ ကွုံတှရေ့မယျ။အရပျဝေးနဲ့ ဆကျသှယျပွီး လုပျတဲ့ အလုပျတှေ အကြိုးပေးမယျ။လာလျလာဘ တိုးတကျခွငျးမြိုး ရှိတယျ။ကိုယျပိုငျ ဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ ရှတေို့းလုပျကိုငျတဲ့ အလုပျတှေ ကောငျးမယျ။သံယောစဉျ မထားသငျ့သူကို သံယောစဉျ ထားမိတာကွောငျ့ စိတျပငျပနျးမယျ။တနင်ျလာ၊ သောကွာ၊ အင်ျဂါနေ့ မှေးသူမြားနှငျ့ ပူးတှဲလုပျရငျ အကြိုးပေးတယျ။ကွာသာပတေး၊ စနနေ့ မှေးသူမြားကွောငျ့ စိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈမယျ။
ကံကောငျးစမေယျ့ ဂဏနျး – ၁၊ ၅၊ ၉
ကံကောငျးစတေဲ့ အရောငျ – အပွာရောငျ၊ အနီရောငျ၊ ကွကျသှေးရောငျ။
ယတွာ – သပွညှေနျ့ ဘုရားကပျလှူခွငျး မကွာခဏ ပွုပေးပါ။
ရာဟုမှေးသူတှေ အတှကျက ယှဉျပွိုငျမှု မှနျသမြှ အောငျမွငျမယျ။ပညာ၊ လုပျငနျး တှဲဖကျ အောငျမွငျမယျ။အလုပျပို၊ ကိစ်စ ပိုတှေ ကွုံပွီး အောငျမွငျမှုရဲ့ အနှဈသာရကို ရရှိမယျ။အထူးကံကောငျးတဲ့ ကာလဖွဈမယျ။ဆနျးပှငျ့မယျ။မိတျဆှကေောငျး အထောကျအကူ ရမယျ။ခရီးကံကောငျးမယျ။အရပျဝေးနဲ့ ဆကျသှယျရမယျ။မတျောတဆ ဖွဈခွငျးကိုတော့ ဂရုစိုကျပါ။တနင်ျလာ၊ သောကွာ၊ စနေ နေ့ မှေးသူမြားကွောငျ့ ကောငျးကြိုးမြား ရမယျ။တနင်ျဂနှေ၊ ဗုဒ်ဓဟူး မှေးသူမြားကွောငျ့ စိတျအနှောငျ့အယှကျ ကွုံနိုငျတယျ။
ကံကောငျးစမေယျ့ ဂဏနျး – ၁၊ ၄၊ ၉
ကံကောငျးစတေဲ့ အရောငျ – အညိုရောငျ၊ အပွာရောငျ၊ မီးခိုးရောငျ
ယတွာ – အဝါရောငျပနျးပှငျ့ မကွာခဏ ကပျလှူ ပူဇျောပါ။
ကွာသာပတေး သားသမီးမြားအတှကျကတော့ ထူးခွားတဲ့ အပွောငျးအလဲနဲ့ တကျလမျးမြားပျေါမယျ။သူတဈပါးထကျ သာအောငျ လုပျနိုငျတဲ့ အရညျအသှေး ပျေါထှကျနတေယျ။ကိုယျပိုငျ လုပျကိုငျခွငျးရဲ့ အနှဈသာရ ကို ရရှိမယျ။ ကံ မွငျ့မား လာမယျ။ကတိပေးတာ သတိထားပါ။ကတိ မတညျသူတှနေဲ့ တှတေ့တျတယျ။မှနျးတာနဲ့ လကျတှေ့ အနညျးငယျ ကှာဟ နမေယျ။ လူမြိုးကှဲ အကြိုးပေးမယျ။
ကံကောငျးစမေယျ့ ဂဏနျး – ၂၊ ၄၊ ၉
ကံကောငျးစတေဲ့ အရောငျ – အညိုရောငျ
ယတွာ – အညိုရောငျ ပစ်စညျးတဈခု လူနဲ့ ဆောငျပါ။
သောကွာနေ့ မှေးသူတှေ အနနေဲ့ကတော့ တဈပတျတာ ကာလ အတှငျး ကောငျးသော အပွောငျးအလဲနဲ့ တိုးတကျမှုတှေ ရှိမယျ။လူမြိုးကှဲ အကြိုးပေးတယျ။အရပျဝေးနဲ့ တှဲဖကျပွီး လုပျကိုငျရတာတှေ အောငျမွငျမယျ။အမေ၊ အဖှား၊ အဒျေါ ကနျြးမာရေး ခြူခွာမယျ။ဥစ်စာဓန တိုးတကျဖှံ့ဖွိုးခွငျးနဲ့ ကွုံမယျ။လုပျစရာ ရှိတာ ရဲရဲတငျးတငျး ရှတေို့းလို့ ကောငျးတယျ။ငှကွေေး ကံကောငျးမယျ။ရနျအတိုကျအခံ ရှိမယျ။ကွာသာပတေး၊ ဗုဒ်ဓဟူး၊ စနေ နေ့ မှေးသူမြား ကောငျးကြိုးပေးပွီး တနင်ျဂနှေ၊ တနင်ျလာနေ့ မှေးသူမြားကွောငျ့ စိတျအနှောငျ့အယှကျမြား ရမယျ။
ကံကောငျးစတေဲ့ အရောငျ – အစိမျးရောငျ၊ အဖွူရောငျ၊ မီးခိုးရောငျ
ယတွာ – သဈရှကျစိမျး တဈရှကျ အမှေးနံ့သာဖနျြးပွီး ပိုကျဆံအိတျထဲ ထညျ့ဆောငျပါ။
စနနေေ့ မှေးသူတှေ အနနေဲ့ကတော့ ရနျမြားမယျ။ပွသနာမြားမယျ။မူလ စီစဉျနတောနဲ့ ကှာဟမယျ။ပွီးမှ လမျးသဈထှငျပွီး အဆငျပွသှေားမယျ။သူတဈပါးကွောငျ့ ကိုယျ့ရဲ့ လကျရှိအခွအေနမှော အခကျအခဲတှေ ကွုံမယျ။ရနျ အတိုကျအခံ ရှိမယျ။ပုံမှနျထကျ ပိုပွီး ငှဝေငျတာမြိုး ရှိမယျ။ကွာသာပတေး၊ သောကွာ၊ စနနေေ့ မှေးသူမြားကွောငျ့ ကောငျးကြိုးမြား ရရှိပွီး အင်ျဂါနေ့၊ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ မှေးသူမြားကွောငျ့ စိတျအနှောငျ့အယှကျ ဖွဈတတျတယျ။
ကံကောငျးစမေယျ့ ဂဏနျး – ၅၊ ၇၊ ၉
ကံကောငျးစတေဲ့ အရောငျ – အနီရောငျ၊ အပွာရောငျ၊ မီးခိုးရောငျ။
ယတွာ – အနီရောငျ ပနျးပှငျ့ ကပျလှူခွငျး မကွာခဏ ပွုလုပျပါ။
Author admin adminPosted on March 20, 2018 Categories ဗေဒင်Leaveacomment on ဆရာစံ-ဇာဏီ ဘို ၏ တစ် ပတ် စာဟော စာ တမ်း
သင် စနေသားသမီးကို ချစ်သူတော်မယ်ဆိုရင်
စနေသားသမီး တွေက လူ့ဘဝကို စရောက်ပီ ဆိုကတည်းက စိတ်ကြီးတတ်ကြပါတယ်။ ဒေါသဖြစ်ပီ ဆိုရင်လည်း အရာဝတ္ထုတခုခုနဲ့ ကိုယ့်အသားကို နာကျင်အောင် လုပ်တတ်တယ်။ ပြောချင်တဲ့စကားကို သွယ်ဝိုက် မပြောတတ်ဘဲ တိုက်ရိုက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတတ်တယ်။ အစွဲအလန်း ကြီးတယ်။ အမှတ်တရတွေကို သတိရနေတတ်တယ်။ ကိုယ့်အပေါ် ကောင်းတဲ့လူဆိုရင် လွယ်လွယ်နဲ့ မမေ့တတ်ကြဘူး။
ဒေါသကြီးရင်လည်း သူများနဲ့ မတူအောင်ပါပဲ။ စိတ်ကြီးတယ် မဟုတ်မခံတတ်ဘူး။ အချိန် ခနလေးနဲ့ ဒေါသအရမ်း ထွက်တတ်ပေမဲ့ ဟုန်းခနဲ ထတောက်တဲ့ မီးလို ဒေါသတွေက ခနပဲ။ ကြာကြာတော့ စိတ်ထဲမထားတတ်ဘူး။ ကိုယ့်ရှေ့မှာ သတ္တဝါတွေမြင်ရင် ချစ်တတ်တယ်။ သနားတတ်တဲ့ စိတ်ထားရှိကြတယ်။ မျက်နှာတည်ပီး ရင်ထဲမှာတော့ တကယ်ခင်တတ်တဲ့ စိတ်ထား အပြည့်အဝ ရှိတယ်။
အနေအေးပေမဲ့ ကိုယ့်ကို လာခင်တဲ့ လူတွေနဲ့ဆို ဖော်ရွေစွာ နေတတ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အချစ် ခင်မင်မှုတွေကိုလည်း လိုချင်ကြတယ်။ မိသားစုတွေရဲ့ ဂရုစိုက်မှုကိုလည်း ခံချင်ကြတာလည်း စနေပါ။ စိတ်ဆိုးနေရင် မျိုသိပ်မထားတတ်ဘူး ဖွင့်ပြောမိတတ်တယ်။ ပြောပီးရင်လည်း အကြောင်းတခုကို အပြန်ပြန်အလှန်လှန် စဉ်းစားတတ်ပီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေတတ်တာလည်း စနေပါဘဲ။
ချစ်သူနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ရန်ဖြစ်ပီး မခေါ်ကြရင် ကိုယ်က ဘယ်တော့မှ အရင်စ မခေါ်ချင်ကြဘူး မာနအိုးတွေပါ။ သူ့ဘက်က စခေါ်ပီဆိုရင်လည်း သူ့ထက်2ဆ ခင်မင်ပြတတ်တယ်။ ခင်ရတဲ့သူတွေကို ကိစ္စတွေတိုင်း မပြောပြတတ်ဘူး။ အချို့သော အရာတွေကို လျှို့ဝှက်ထားတတ်တယ်။ ကိုယ်လုပ်တဲ့ ကိစ္စတွေတိုင်းကို လက်ကြောတင်းအောင် အကောင်းဆုံး လုပ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ အရာတွေကို အကောင်းပြောလည်း ခံချင်ကြပါတယ်။
သီချင်းတွေ ဒဏ္ဍရီစိတ်ကူးယဉ် ဆန်ဆန်တွေကို နှစ်သက်ကြတယ်။ တခါတလေ တယောက်ထဲရှိရင် သီချင်းတွေ ညည်းနေတတ်တယ်။ အိမ်မက်တွေကိုလည်း အမျိုးမျိုးအထအန ကောက်တတ်ကြတယ်။ အမျှော်အမြင်ကြီးတယ် တိုးတက်ချင်တဲ့ စိတ်တွေ အင်မတန် ရှိတယ်။ စိတ်သဘောထား ကောင်းတတ်ကြတာ စနေပါ
သငျ စနသေားသမီးကို ခဈြသူတျောမယျဆိုရငျ
စနသေားသမီး တှကေ လူ့ဘဝကို စရောကျပီ ဆိုကတညျးက စိတျကွီးတတျကွပါတယျ။ ဒေါသဖွဈပီ ဆိုရငျလညျး အရာဝတ်ထုတခုခုနဲ့ ကိုယျ့အသားကို နာကငျြအောငျ လုပျတတျတယျ။ ပွောခငျြတဲ့စကားကို သှယျဝိုကျ မပွောတတျဘဲ တိုကျရိုကျ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောတတျတယျ။ အစှဲအလနျး ကွီးတယျ။ အမှတျတရတှကေို သတိရနတေတျတယျ။ ကိုယျ့အပျေါ ကောငျးတဲ့လူဆိုရငျ လှယျလှယျနဲ့ မမတေ့တျကွဘူး။
ဒေါသကွီးရငျလညျး သူမြားနဲ့ မတူအောငျပါပဲ။ စိတျကွီးတယျ မဟုတျမခံတတျဘူး။ အခြိနျ ခနလေးနဲ့ ဒေါသအရမျး ထှကျတတျပမေဲ့ ဟုနျးခနဲ ထတောကျတဲ့ မီးလို ဒေါသတှကေ ခနပဲ။ ကွာကွာတော့ စိတျထဲမထားတတျဘူး။ ကိုယျ့ရှမှေ့ာ သတ်တဝါတှမွေငျရငျ ခဈြတတျတယျ။ သနားတတျတဲ့ စိတျထားရှိကွတယျ။ မကျြနှာတညျပီး ရငျထဲမှာတော့ တကယျခငျတတျတဲ့ စိတျထား အပွညျ့အဝ ရှိတယျ။
အနအေေးပမေဲ့ ကိုယျ့ကို လာခငျတဲ့ လူတှနေဲ့ဆို ဖျောရှစှော နတေတျပါတယျ။ သူငယျခငျြးတှရေဲ့ အခဈြ ခငျမငျမှုတှကေိုလညျး လိုခငျြကွတယျ။ မိသားစုတှရေဲ့ ဂရုစိုကျမှုကိုလညျး ခံခငျြကွတာလညျး စနပေါ။ စိတျဆိုးနရေငျ မြိုသိပျမထားတတျဘူး ဖှငျ့ပွောမိတတျတယျ။ ပွောပီးရငျလညျး အကွောငျးတခုကို အပွနျပွနျအလှနျလှနျ စဉျးစားတတျပီး စိတျမကောငျး ဖွဈနတေတျတာလညျး စနပေါဘဲ။
ခဈြသူနဲ့ဖွဈဖွဈ သူငယျခငျြးနဲ့ပဲဖွဈဖွဈ ရနျဖွဈပီး မချေါကွရငျ ကိုယျက ဘယျတော့မှ အရငျစ မချေါခငျြကွဘူး မာနအိုးတှပေါ။ သူ့ဘကျက စချေါပီဆိုရငျလညျး သူ့ထကျ2ဆ ခငျမငျပွတတျတယျ။ ခငျရတဲ့သူတှကေို ကိစ်စတှတေိုငျး မပွောပွတတျဘူး။ အခြို့သော အရာတှကေို လြှို့ဝှကျထားတတျတယျ။ ကိုယျလုပျတဲ့ ကိစ်စတှတေိုငျးကို လကျကွောတငျးအောငျ အကောငျးဆုံး လုပျကွပါတယျ။ ကိုယျလုပျထားတဲ့ အရာတှကေို အကောငျးပွောလညျး ခံခငျြကွပါတယျ။
သီခငျြးတှေ ဒဏ်ဍရီစိတျကူးယဉျ ဆနျဆနျတှကေို နှဈသကျကွတယျ။ တခါတလေ တယောကျထဲရှိရငျ သီခငျြးတှေ ညညျးနတေတျတယျ။ အိမျမကျတှကေိုလညျး အမြိုးမြိုးအထအန ကောကျတတျကွတယျ။ အမြှျောအမွငျကွီးတယျ တိုးတကျခငျြတဲ့ စိတျတှေ အငျမတနျ ရှိတယျ။ စိတျသဘောထား ကောငျးတတျကွတာ စနပေါ
Author admin adminPosted on March 15, 2018 Categories ဗေဒင်Leaveacomment on သင် စနေသားသမီးကို ချစ်သူတော်မယ်ဆိုရင်
အချစ်ရေး နှင့် အိမ်ထောင်ရေးတွင် စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် ယတြာ 💛
ဆရာကိုယ်တိုင် တွက်ချက်ပြီး ရေးသား တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ။ အရမ်းလွယ်ပါတယ်။
စတီးပန်းကန် တစ်ချပ်တွင် ဆန်(3)ဆုပ် ထည့်ပါ။
ထိုပန်းကန်ပေါ်တွင် ပုံပါအတိုင်း ကြေးအိုးတစ်လုံး တင်လိုက်ပါ။ ဓာတ်ပုံ နှစ်ပုံကို ကပ်လိုက်ပါ။
သင်္ဘောသီး တစ်လုံးပေါ်တွင် နာမည်များကို ပုံပါအတိုင်း ရေးပါ။
ထိုသင်္ဘောသီးပေါ်တွင် ဖယောင်းတိုင် ထွန်းပါ။ နံနက် (6)နာရီတွင် ပြုလုပ်ပါ။
စနေနေ့ အပတ်တိုင်3းကြိမ်တိတိ ဤနည်းအတိုင်း ပြုလုပ်ကြပါ။
credit နက္ခတ် ဗေဒင် ပညာရှင် ဆရာနေထွန်းအောင်
အခဈြရေး နှငျ့ အိမျထောငျရေးတှငျ စိတျညဈနသေူမြားအတှကျ ယတွာ 💛
ဆရာကိုယျတိုငျ တှကျခကျြပွီး ရေးသား တငျပေးလိုကျပါတယျ။ အားလုံးပဲ အဆငျပွကွေပါစေ။ အရမျးလှယျပါတယျ။
စတီးပနျးကနျ တဈခပျြတှငျ ဆနျ(3)ဆုပျ ထညျ့ပါ။
ထိုပနျးကနျပျေါတှငျ ပုံပါအတိုငျး ကွေးအိုးတဈလုံး တငျလိုကျပါ။ ဓာတျပုံ နှဈပုံကို ကပျလိုကျပါ။
သငေ်ျဘာသီး တဈလုံးပျေါတှငျ နာမညျမြားကို ပုံပါအတိုငျး ရေးပါ။
ထိုသငေ်ျဘာသီးပျေါတှငျ ဖယောငျးတိုငျ ထှနျးပါ။ နံနကျ (6)နာရီတှငျ ပွုလုပျပါ။
စနနေေ့ အပတျတိုငျ3းကွိမျတိတိ ဤနညျးအတိုငျး ပွုလုပျကွပါ။
credit နက်ခတျ ဗဒေငျ ပညာရှငျ ဆရာနထှေနျးအောငျ
Author admin adminPosted on March 15, 2018 Categories ဗေဒင်Leaveacomment on အချစ်ရေး နှင့် အိမ်ထောင်ရေးတွင် စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် ယတြာ 💛
သင့်နာမည်ကို ကောင်းမကောင်း သင်သိပီလား…
သင့်နာမည်ကို ကောင်းလှပြီဟု ထင်နေပါသလား??? လှနေတယ် လို့ရော ထင်နေပါသလား??? နေ့သင့်နံသင့် ဟုရော ထင်နေပါသလား??? မိတ်ဖက်တွေ တွဲထားသလား??? ရန်ဘက်တွေရော တွဲမိနေသလား??? လူတစ်ယောက်အတွက် နာမည်သည် အရေးပါလှပေသည်။
လူရယ်ဟု ဖြစ်လာပြီဆို နာမည်တစ်ခု ရှိဖို့လိုအပ်ပေသည်။ တစ်ချို့လဲနှစ်ခု တစ်ချို့က သုံးခု လောက်ရှိမည်။ တစ်ချို့က မရေမတွက်နိုင် ထိုအရေးပါလှသော နာမည်ကို မွေးဖွားပြီး မကြာမှီတွင် ပေးတတ်ကြသည်။ လူတစ်ချို့က အလွယ်ပေးသည်။ တစ်ချို့က လေးနက်စွာ စဉ်းစားသည်။ တစ်ချို့က နားလည်တတ်ကျွမ်း သူများနှင့် တိုင်ပင်ပြီးမှ ပေးလေ့ ရှိကြသည်။ နေ့သင့် နံသင့်တွေ လိုက်ဖက်မူတွေ လှပမှုတွေ အထားအသို အညွန့်အတက် အခက်အဝေတို့ စုံလင်လှပေသည်။
နာမည်ပေးရာတွင် အများအားဖြင့် မိဘနှစ်ပါးက ပေးလေ့ရှိကြသည်။ အဖိုးအဖွားတွေ ဆွေမျိုးတွေ နားလည်တတ်ကျွမ်း သူတွေလည်း ပေးကြသည်။ ထိုနာမည်ပေးရာတွင် ကောင်းကောင်းလေး လှလှလေးဖြစ်ဖို့ လူတိုင်းလိုလားကြသည်သာ ဖြစ်သည်။ ပေးလိုက်သော နာမည်သည် မွေးပြီးမှသည် သေပြီးသည်အထိ အရေးပါလှပေသည်။ တစ်ချို့ နာမည်များသည် ခေါ်လို့ ကောင်းသည် တစ်ချို့နာမည်များသည် အေးသည် လှသည် ။ တစ်ချို့နာမည်များသည် လိုက်ဖက်သည် (ဖြူဖွေးဆိုတဲ့ နာမည်နှင့် မဲတူးနေသော လူများကို မြင်ဖူးကြပေမည်) ။
တစ်ချို့ကမာသည် တစ်ချို့ကပျော့သည်။ တစ်ချို့က နာမည်နှင့် လိုက်ဖက်အောင် တော်သည်။ တစ်ချို့က နာမည်စီးနေသည်ဟု အပြောခံရလေ့ရှိသည်။ တစ်ချို့က နာမည်ကြောင့် ထွန်းတောက်နေသူတွေ ရှိသလို တစ်ချို့ကတော့ နာမည်ကြောင့် ဆုတ်ယုတ်နေသယောင် ဖြစ်တတ်သည်။ နာမည်နာမ တစ်ခုပေးပြီးသည်နှင့် လွယ်လွယ်နှင့် ပြင်ဖို့ခက်ပေသည်။ ထိုကြောင့် နာမည်ပေးရာတွင် သေခြာ စဉ်းစားဖို့တော့ လိုပေသည်။
နေ့သင့်နံသင့် နာမည်အစများ တနင်္လာ က ၊ခ ၊ ဂ၊ ဃ၊ င အင်္ဂါ စ၊ ဆ၊ ဇ၊ ဈ၊ ည ဗုဒ္ဓဟူး ရ ၊ယ၊ လ၊ ဝ ကြာသာပတေး ပ၊ ဖ၊ ဘ၊ ဗ ၊မ သောကြာ သ၊ ဟ စနေ တ၊ ထ၊ ဒ၊ ဓ၊ န တနင်္ဂနွေ အ ၊ဥ၊ ဧ စသည်တို့ ဖြစ်သည်။ နာမည် တစ်ခုစီတိုင်းတွင်`ဗျည်း၊ သရ´တို့ဖြင့် တည်ဆောက်ထားပြီး ၄င်း`ဗျည်း၊ သရ´တို့တွင် ဂဏန်းတန်ဖိုးများ သက်မှတ်ထားရှိကြသည်။ ဗျည်း၊ သရ တို့၏ ဂဏန်းတန်ဖိုးများကတော့…
၁။ အ၊ ဥ၊ေ၊ါ၊ိ၊ီ၊ု၊ူ၊ဲ၊ံ့၊်၊း၊ တန်ဖိုးက ၈
၂။ က ၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င. တန်ဖိုးက ၅
၃။ စ၊ ဆ၊ ဇ၊ ဈ၊ ည. တန်ဖိုးက ၆
၄။ ယ၊ ရ၊ လ၊ ဝ၊ျ(ယပင်း)၊ြ (ယရစ်)၊ွ(ဝဆွဲ) တန်ဖိုး၃
၅။ ပ ၊ဖ ၊ဘ ၊ဗ၊ မ. တန်ဖိုး ၁
၆။ သ ၊ ဟ၊ှ(ဟထိုး) တန်ဖိုး ၂
၇။ တ ၊ ထ၊ ဒ၊ ဓ၊ န. တန်ဖိုး ၇
၈။ ဋ ၊ ဌ၊ ဍ၊ ဃ၊ ဏ. တန်ဖိုး ၄ တို့ ဖြစ်ကြသည်။
နာမည်တစ်ခု၏ `ဗျည်း၊ သရ´ဂဏန်း တန်ဖိုးများကို ပေါင်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့် နာမည်တစ်ခု၏ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးကို ရရှိပေမည်။ ရရှိလာသော စုစုပေါင်း တန်ဖိုးကို (၈) ဂဏန်းဖြင့် စားသော် အကြွင်း ရရှိပေမည်။ ရရှိလာသော အကြွင်းများကို မူတည်၍ နာမည်အဟောများ ရှိပေသည်။ ထိုနာမည် အဟောများသည် ကုန်းဘောင်ခေတ် ပေမူ ပရပိုက် တို့မှဖြစ်ပါသည်။ သင့်နာမည် ကောင်းမကောင်းကို တွက်ကြည့်နိုင်ပါသည်။
ဥပမာ ကျနော့် နာမည်
ဇော်နေလ =(၈+ ၆+ ၈+ ၈)+( ၈+ ၇)+ ၃ = ၃၀+ ၁၅+ ၃ =၄၈
၄၈ ÷ ၈= စားလဒ် (၆)၊ အကြွင်း(၀) ထိုကြောင့် `ဇော်နေလ´သည် အကြွင်း (၀)ဖြစ်၍ `လင်းတ´နာမည် ဖြစ်သည်။
အကြွင်း (၀) `လင်းတ´နာမည်အဟော
`လင်းတ´နာမည်သည် ငုပ်လိုက်ပေါ်လိုက် ဖြစ်နေမည်။ ကိုယ့်အကြံအစည်ကို သူများက လုပြီး လုပ်ခြင်းခံရတတ်မည်။ အရှက်တကွဲ ဖြစ်ဖို့လွယ်မည်။ စိတ်မတည် မငြိမ်ဖြစ်နေတတ်မည်။ ဆရာသမား လူကြီးများအတွက် အနစ်နာခံရမည်။
`တံခွန်´နာမည်မျိုး ခေါ်တွင်ခံရသူများသည် ကျော်ကြားသော အောင်မြင်သူများ ဖြစ်သည်။ အနုပညာဖြင့် အောင်မြင်လိမ့်မည်။ လူအများနှင့် ဆက်နွယ် ပက်သက်နေပြီး အများကိုကြီးကြပ် ကွပ်ကဲအုပ်ချုပ် လုပ်ကိုင်ရသူ ဖြစ်မည်။ တစ်ခုထက်မကသော အလုပ်အကိုင်များကို တစ်ပြိုင်တည်း လုပ်ကိုင်ရသူ ဖြစ်မည်။ သေလျှင်သော်မှ နာမည် ကျန်ရစ်မည်။ ၄င်းနာမည် မျိုးများသည် အတိုက်အခံနှင့် ယှဉ်၍ အောင်မြင်တတ်ကြ၏။
`အခိုး´နာမည်သည် သြဇာအာဏာ တည်တံ၏။ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး တိုးတက်သည်ထက် တိုးတက်အောင် စနစ်တကျ လုပ်တတ်၏။ လူအများနှင့် စပ်ဆိုင်သော အလုပ်များကို လုပ်တတ်၏။ လုပ်ချင်သည့် လုပ်ငန်းကိစ္စများကို မဖြစ်မနေ လုပ်တတ်၏။
`ခြင်္သေ့ ´နာမည်သည် လူသိများမည်။ နေရာမရ ရအောင် ကြိုးစားမည်။ ထင်ပေါ်ကျော်ကြား လူသိများမည်။ အာဏာ တန်ခိုးကြီးမည် ထိပ်ကိုရောက်ပြီး ပြန်ဆင်းတတ်သည်။
`ကျား´နာမည်သည် အတက်အကျ မြန်တတ်၏။ ကံတရားသည် ဘီးကဲ့သို့ ကောင်းတာလုပ်လျှင် ကောင်းကျိုး ခံစားရမည်။ ဆိုးတာလုပ်လျှင် ဆိုးကျိုးခံစားရမည် ဖြစ်၏။ အတိုက်အခံယှဉ်၍ အကျိုးပေးတတ်၏။ စိတ်ကူးကို အကောင်အထည် ဖော်တတ်၏။
`နွား´နာမည်ရှင်သည် လူအများ၏ အသုံးချခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။ အများအတွက် အနစ်နာခံရမည်။ အခွင်အလမ်းကောင်းများ တွေ့မည်။ ရန်သူ၏ အတိုက်အခိုက် ခံရမည်။
`မြင်း´နာမည်သည် အလုပ် အမျိုးမျိုးတို့ကို လုပ်ရမည်။ လှုပ်ရှားမှု များမည်။ အတက်အကျ အမြဲ ရှိတတ်သည်။ သေးငယ်သော ပြသနာမှ ကြီးမားသော မှုခင်းများအထိ ဖြစ်တတ်သည်။
`ဆင်´နာမည်သည် ရေရှည်စီမံကိန်းချပြီး လုပ်ရသည့် လုပ်ငန်းများတွင် အောင်မြင် အကျိုးပေးမည်။ ဘဝကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ လျှောက်လှမ်းရမည်။ ဖျော်ဖြေမှု အနုပညာ လုပ်ငန်းများဖြင့် အကျိုးပေးမည်။ ကဲမိတ်ဆွေတို့လည်း မိမိတို့နာမည်ကို တွက်ချက်ကြည့်နိုင်ပေမည်။ မိဘ မောင်နှမ ဆွေမျိုး သူငယ်ချင်း နီးစပ်သူများကိုလည်း တွက်ချက်ပေး၍ မန်းရှင်း ခေါ်ပေးနိုင်လေပြီ။
Credit ကိုးကား ဆရာဦးခန့်ကျော်၏ ကိုယ်တွေ့သုခချမ်းသာဣစ္ဆာသယဂမ္ဘီရစာအုပ်မှ
သငျ့နာမညျကို ကောငျးမကောငျး သငျသိပီလား…
သငျ့နာမညျကို ကောငျးလှပွီဟု ထငျနပေါသလား??? လှနတေယျ လို့ရော ထငျနပေါသလား??? နသေ့ငျ့နံသငျ့ ဟုရော ထငျနပေါသလား??? မိတျဖကျတှေ တှဲထားသလား??? ရနျဘကျတှရေော တှဲမိနသေလား??? လူတဈယောကျအတှကျ နာမညျသညျ အရေးပါလှပသေညျ။
လူရယျဟု ဖွဈလာပွီဆို နာမညျတဈခု ရှိဖို့လိုအပျပသေညျ။ တဈခြို့လဲနှဈခု တဈခြို့က သုံးခု လောကျရှိမညျ။ တဈခြို့က မရမေတှကျနိုငျ ထိုအရေးပါလှသော နာမညျကို မှေးဖှားပွီး မကွာမှီတှငျ ပေးတတျကွသညျ။ လူတဈခြို့က အလှယျပေးသညျ။ တဈခြို့က လေးနကျစှာ စဉျးစားသညျ။ တဈခြို့က နားလညျတတျကြှမျး သူမြားနှငျ့ တိုငျပငျပွီးမှ ပေးလေ့ ရှိကွသညျ။ နသေ့ငျ့ နံသငျ့တှေ လိုကျဖကျမူတှေ လှပမှုတှေ အထားအသို အညှနျ့အတကျ အခကျအဝတေို့ စုံလငျလှပသေညျ။
နာမညျပေးရာတှငျ အမြားအားဖွငျ့ မိဘနှဈပါးက ပေးလရှေိ့ကွသညျ။ အဖိုးအဖှားတှေ ဆှမြေိုးတှေ နားလညျတတျကြှမျး သူတှလေညျး ပေးကွသညျ။ ထိုနာမညျပေးရာတှငျ ကောငျးကောငျးလေး လှလှလေးဖွဈဖို့ လူတိုငျးလိုလားကွသညျသာ ဖွဈသညျ။ ပေးလိုကျသော နာမညျသညျ မှေးပွီးမှသညျ သပွေီးသညျအထိ အရေးပါလှပသေညျ။ တဈခြို့ နာမညျမြားသညျ ချေါလို့ ကောငျးသညျ တဈခြို့နာမညျမြားသညျ အေးသညျ လှသညျ ။ တဈခြို့နာမညျမြားသညျ လိုကျဖကျသညျ (ဖွူဖှေးဆိုတဲ့ နာမညျနှငျ့ မဲတူးနသေော လူမြားကို မွငျဖူးကွပမေညျ) ။
တဈခြို့ကမာသညျ တဈခြို့ကပြော့သညျ။ တဈခြို့က နာမညျနှငျ့ လိုကျဖကျအောငျ တျောသညျ။ တဈခြို့က နာမညျစီးနသေညျဟု အပွောခံရလရှေိ့သညျ။ တဈခြို့က နာမညျကွောငျ့ ထှနျးတောကျနသေူတှေ ရှိသလို တဈခြို့ကတော့ နာမညျကွောငျ့ ဆုတျယုတျနသေယောငျ ဖွဈတတျသညျ။ နာမညျနာမ တဈခုပေးပွီးသညျနှငျ့ လှယျလှယျနှငျ့ ပွငျဖို့ခကျပသေညျ။ ထိုကွောငျ့ နာမညျပေးရာတှငျ သခွော စဉျးစားဖို့တော့ လိုပသေညျ။
နသေ့ငျ့နံသငျ့ နာမညျအစမြား တနင်ျလာ က ၊ခ ၊ ဂ၊ ဃ၊ င အင်ျဂါ စ၊ ဆ၊ ဇ၊ ဈ၊ ည ဗုဒ်ဓဟူး ရ ၊ယ၊ လ၊ ဝ ကွာသာပတေး ပ၊ ဖ၊ ဘ၊ ဗ ၊မ သောကွာ သ၊ ဟ စနေ တ၊ ထ၊ ဒ၊ ဓ၊ န တနင်ျဂနှေ အ ၊ဥ၊ ဧ စသညျတို့ ဖွဈသညျ။ နာမညျ တဈခုစီတိုငျးတှငျ`ဗညျြး၊ သရ´တို့ဖွငျ့ တညျဆောကျထားပွီး ၎င်းငျး`ဗညျြး၊ သရ´တို့တှငျ ဂဏနျးတနျဖိုးမြား သကျမှတျထားရှိကွသညျ။ ဗညျြး၊ သရ တို့၏ ဂဏနျးတနျဖိုးမြားကတော့…
၁။ အ၊ ဥ၊ေ၊ါ၊ိ၊ီ၊ု၊ူ၊ဲ၊ံ့၊ျ၊း၊ တနျဖိုးက ၈
၂။ က ၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င. တနျဖိုးက ၅
၃။ စ၊ ဆ၊ ဇ၊ ဈ၊ ည. တနျဖိုးက ၆
၄။ ယ၊ ရ၊ လ၊ ဝ၊ြ(ယပငျး)၊ွ(ယရဈ)၊ှ(ဝဆှဲ) တနျဖိုး၃
၅။ ပ ၊ဖ ၊ဘ ၊ဗ၊ မ. တနျဖိုး ၁
၆။ သ ၊ ဟ၊ှ(ဟထိုး) တနျဖိုး ၂
၇။ တ ၊ ထ၊ ဒ၊ ဓ၊ န. တနျဖိုး ၇
၈။ ဋ ၊ ဌ၊ ဍ၊ ဃ၊ ဏ. တနျဖိုး ၄ တို့ ဖွဈကွသညျ။
နာမညျတဈခု၏ `ဗညျြး၊ သရ´ဂဏနျး တနျဖိုးမြားကို ပေါငျးလိုကျခွငျးအားဖွငျ့ နာမညျတဈခု၏ စုစုပေါငျးတနျဖိုးကို ရရှိပမေညျ။ ရရှိလာသော စုစုပေါငျး တနျဖိုးကို (၈) ဂဏနျးဖွငျ့ စားသျော အကွှငျး ရရှိပမေညျ။ ရရှိလာသော အကွှငျးမြားကို မူတညျ၍ နာမညျအဟောမြား ရှိပသေညျ။ ထိုနာမညျ အဟောမြားသညျ ကုနျးဘောငျခတျေ ပမေူ ပရပိုကျ တို့မှဖွဈပါသညျ။ သငျ့နာမညျ ကောငျးမကောငျးကို တှကျကွညျ့နိုငျပါသညျ။
ဥပမာ ကနြေျာ့ နာမညျ
ဇျောနလေ =(၈+ ၆+ ၈+ ၈)+( ၈+ ၇)+ ၃ = ၃၀+ ၁၅+ ၃ =၄၈
၄၈ ÷ ၈= စားလဒျ (၆)၊ အကွှငျး(ဝ) ထိုကွောငျ့ `ဇျောနလေ´သညျ အကွှငျး (ဝ)ဖွဈ၍ `လငျးတ´နာမညျ ဖွဈသညျ။
အကွှငျး (ဝ) `လငျးတ´နာမညျအဟော
`လငျးတ´နာမညျသညျ ငုပျလိုကျပျေါလိုကျ ဖွဈနမေညျ။ ကိုယျ့အကွံအစညျကို သူမြားက လုပွီး လုပျခွငျးခံရတတျမညျ။ အရှကျတကှဲ ဖွဈဖို့လှယျမညျ။ စိတျမတညျ မငွိမျဖွဈနတေတျမညျ။ ဆရာသမား လူကွီးမြားအတှကျ အနဈနာခံရမညျ။
`တံခှနျ´နာမညျမြိုး ချေါတှငျခံရသူမြားသညျ ကြျောကွားသော အောငျမွငျသူမြား ဖွဈသညျ။ အနုပညာဖွငျ့ အောငျမွငျလိမျ့မညျ။ လူအမြားနှငျ့ ဆကျနှယျ ပကျသကျနပွေီး အမြားကိုကွီးကွပျ ကှပျကဲအုပျခြုပျ လုပျကိုငျရသူ ဖွဈမညျ။ တဈခုထကျမကသော အလုပျအကိုငျမြားကို တဈပွိုငျတညျး လုပျကိုငျရသူ ဖွဈမညျ။ သလြှေငျသျောမှ နာမညျ ကနျြရဈမညျ။ ၎င်းငျးနာမညျ မြိုးမြားသညျ အတိုကျအခံနှငျ့ ယှဉျ၍ အောငျမွငျတတျကွ၏။
`အခိုး´နာမညျသညျ သွဇာအာဏာ တညျတံ၏။ ဘဝတဈလြှောကျလုံး တိုးတကျသညျထကျ တိုးတကျအောငျ စနဈတကြ လုပျတတျ၏။ လူအမြားနှငျ့ စပျဆိုငျသော အလုပျမြားကို လုပျတတျ၏။ လုပျခငျြသညျ့ လုပျငနျးကိစ်စမြားကို မဖွဈမနေ လုပျတတျ၏။
`ခွငေ်ျသ့ ´နာမညျသညျ လူသိမြားမညျ။ နရောမရ ရအောငျ ကွိုးစားမညျ။ ထငျပျေါကြျောကွား လူသိမြားမညျ။ အာဏာ တနျခိုးကွီးမညျ ထိပျကိုရောကျပွီး ပွနျဆငျးတတျသညျ။
`ကြား´နာမညျသညျ အတကျအကြ မွနျတတျ၏။ ကံတရားသညျ ဘီးကဲ့သို့ ကောငျးတာလုပျလြှငျ ကောငျးကြိုး ခံစားရမညျ။ ဆိုးတာလုပျလြှငျ ဆိုးကြိုးခံစားရမညျ ဖွဈ၏။ အတိုကျအခံယှဉျ၍ အကြိုးပေးတတျ၏။ စိတျကူးကို အကောငျအထညျ ဖျောတတျ၏။
`နှား´နာမညျရှငျသညျ လူအမြား၏ အသုံးခခြွငျးကို ခံရလိမျ့မညျ။ အမြားအတှကျ အနဈနာခံရမညျ။ အခှငျအလမျးကောငျးမြား တှမေ့ညျ။ ရနျသူ၏ အတိုကျအခိုကျ ခံရမညျ။
`မွငျး´နာမညျသညျ အလုပျ အမြိုးမြိုးတို့ကို လုပျရမညျ။ လှုပျရှားမှု မြားမညျ။ အတကျအကြ အမွဲ ရှိတတျသညျ။ သေးငယျသော ပွသနာမှ ကွီးမားသော မှုခငျးမြားအထိ ဖွဈတတျသညျ။
`ဆငျ´နာမညျသညျ ရရှေညျစီမံကိနျးခပြွီး လုပျရသညျ့ လုပျငနျးမြားတှငျ အောငျမွငျ အကြိုးပေးမညျ။ ဘဝကိုတညျငွိမျအေးခမျြးစှာ လြှောကျလှမျးရမညျ။ ဖြျောဖွမှေု အနုပညာ လုပျငနျးမြားဖွငျ့ အကြိုးပေးမညျ။ ကဲမိတျဆှတေို့လညျး မိမိတို့နာမညျကို တှကျခကျြကွညျ့နိုငျပမေညျ။ မိဘ မောငျနှမ ဆှမြေိုး သူငယျခငျြး နီးစပျသူမြားကိုလညျး တှကျခကျြပေး၍ မနျးရှငျး ချေါပေးနိုငျလပွေီ။
Credit ကိုးကား ဆရာဦးခနျ့ကြျော၏ ကိုယျတှသေု့ခခမျြးသာဣစ်ဆာသယဂမ်ဘီရစာအုပျမှ
Author admin adminPosted on March 15, 2018 Categories ဗေဒင်Leaveacomment on သင့်နာမည်ကို ကောင်းမကောင်း သင်သိပီလား…
ကမ်းခြေတွင် ရေဆင်းကူးရင်း ရုရှား အမျိုးသမီးတစ်ဦး မီးဖွားခဲ့
ကမျးခွတှေငျ ရဆေငျးကူးရငျး ရုရှား အမြိုးသမီးတဈဦး မီးဖှားခဲ့
မတျလ ၁၀ ရကျက ဖှားမွငျခဲ့သညျ့ ကလေးငယျနှငျ့ ယငျး၏ မိသားစုဝငျမြား ကမျးစပျတှငျ ဗြာမြားနသေညျ့ ဓာတျပုံမြား အငျတာနကျပျေါ ရောကျလာသညျ့နောကျ လူအမြားက စိတျဝငျတစား ဝငှေခဲ့ကွသညျ။
အီဂဈြနိုငျငံ၊ ဒါဟကျဘျရှိ ပငျလယျနီ ကမျးခွတှေငျ အမြိုးသမီးနှငျ့ မိသားစုဝငျမြား ရဆေငျးကူးနရေငျး ကလေးမီးဖှားခဲ့ခွငျးဟု ဒသေခံ မီဒီယာမြားက ဖျောပွခဲ့သညျ။
အဆိုပါ မီးဖှားမှုကို အမြိုးသမီး၏ ခငျပှနျးဖွဈသူနှငျ့ ကမျးခွတှေငျ ရှိနသေညျ့ ဆရာဝနျ တဈဦးက ကူညီပေးခဲ့ကွသညျ။ မိခငျဖွဈလာသညျ့ အမြိုးသမီးသညျ ကလေးငယျကို သဘာဝအတိုငျး ဖှားမွငျခဲ့ပွီး နီတာရဲ ကလေးငယျလေးကို တှမွေ့ငျရခြိနျ၌ ဝမျးသာအံ့ဩရငျး တုနျလှုပျနဟေနျ တှရေ့သညျ။
ယငျးဓာတျပုံမြားကို ဟာဒီယာ ဟိုဈနီ အယျလျဆာ့ဒျ အမညျရှိ အမြိုးသမီးက အငျတာနကျတှငျ တငျခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။ ဓာတျပုံမြားကို ဟာဒီယာ၏ ဦးလေးက ရိုကျယူခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။
ဟာဒီယာက အမြိုးသမီးသညျ ရကေူးရငျး မီးဖှားခငျြလာသညျ့နောကျ အနီးတှငျ ရှိနသေညျ့ ဆရာဝနျ၏ အကွံပေးခကျြအရ ပငျလယျကမျးစပျတှငျပငျ လိုအပျသော လှုပျရှားမှုမြား ပွုလုပျပွီး ကလေးမှေးခဲ့ခွငျးဟု ဆိုသညျ။ ထို့အပွငျ မီးဖှားပွီးခြိနျ၌လညျး အမြိုးသမီးသညျ မတျတပျရပျ လမျးလြှောကျနိုငျနသေညျကို တှရေ့သညျ။
Water Birthချေါ ကလေးမှေးသညျ့ နညျးလမျးတဈခုတှငျ ရထေုကို အသုံးပွုခွငျးဖွငျ့ ကလေးမိခငျမြား၏ နာကငျြမှု ဝဒေနာကို လြော့ပါးစကွေောငျး ပညာရှငျမြားက ယူဆကွသညျ။ ထို့အပွငျ ကလေးငယျသညျ အပွငျလောကသို့ ရောကျရောကျခငျြး ရဖွေငျ့ ထိတှခွေ့ငျးက မိခငျဝမျးတှငျး၌ ကိုးလကွာ ၎င်းငျးနထေိုငျခဲ့ရသညျ့ ပတျဝနျးကငျြနှငျ့ ပိုမိုတူညီသညျ့ ကောငျးကြိုးလညျး ရှိနိုငျကွောငျး သိရသညျ။
ဟာဒီယာ တငျထားသညျ့ ဓာတျပုံမြားတှငျ အသကျကွီးဟနျရှိသညျ့ အမြိုးသားကွီး တဈဦးက ခကျြကွိုးတနျးလနျးနှငျ့ ကလေးငယျကို ပှခြေီ့ ချေါဆောငျလာပွီး ယငျးသညျ ဆရာဝနျဖွဈကွောငျး ဟာဒီယာက ရေးသားထားသညျ။ မိခငျဖွဈသူမှာ သတျမှတျမှေးရကျ မတိုငျမီ အီဂဈြ၌ လာရောကျ အပနျးဖွနေခွေငျးဖွဈရာ ကလေးသညျ လမစဘေဲ့ မှေးဖှားခဲ့ခွငျးဟု ယူဆရကွောငျးလညျး သတငျးမြားက ဖျောပွသှားသညျ။
Author admin adminPosted on March 14, 2018 Categories ဗေဒင်Leaveacomment on ကမ်းခြေတွင် ရေဆင်းကူးရင်း ရုရှား အမျိုးသမီးတစ်ဦး မီးဖွားခဲ့
တစ်ပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်း မိတ်ဆွေတို့ ချိန်ဆနိုင်ရန် တစ်ပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်း မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့မှ မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့အထိ ကံ ဥာဏ် ၀ီရိယ သုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင် ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေသော် …
Author admin adminPosted on March 14, 2018 Categories ဗေဒင်Leaveacomment on မိတ်ဆွေတို့ ချိန်ဆနိုင်ရန် တစ်ပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်း
သင် ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးကို ချစ်သူတော်မယ်ဆိုရင်
ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးလေး တွေကတော့ အရမ်း စိတ်ကြီးတဲ့ သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်.. သူတို့လေးတွေက ညဏ်ကောင်းသလောက် အပျင်းကြီးတဲ့ သူတွေလည်း ဖြစ်တယ်…. ဒါကြောင့် ပညာရေးမှာဖြစ်ဖြစ် စီးပွားရေးမှာ ဖြစ်ဖြစ် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်ဘူး… ဒါကြောင့် အောင်မြင်ဖို့ဆို ကြိုးစားအားထုတ်မှု လေးတွေ ရှိမှ ဖြစ်မယ်…
အမှန်တရားကို လက် ခံတယ်.. ဒါပေမဲ့ သူတို့လေးတွေ ဆီမှာ ဘယ်သူကိုမှ မပြောပြတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်လေးတွေ ရှိနေတတ်ကြတယ်…. တစ်ယောက်ထဲ နေရတာကိုပဲ သဘောကျတယ်… အပေါင်းအသင်း သိပ်မရှိပေမဲ့ မိတ်ဆွေ ပေါတယ်…. သူတစ်ပါး အကူအညီ လိုရင် ပေးတတ်ကြပေမဲ့ ကိုယ်က သူတစ်ပါးဆီကို အကူအညီ မတောင်းတတ်ကြဘူး……. (များ သောအားဖြင့်ပေါ့)
ဒါကြောင့် အားနာကြီးတယ် လို့ ပြောရမယ်.. အနုပညာ ဝါသနာကြီးတယ်… အနုပညာ ထဲမှာမှ ဂီတကို ပိုပြီး ရူးသွပ် ကြတယ်…. တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ကိုကို အထီးကျန် နေသလိုမျိုး ခံစားရတတ်တယ်…. အချစ်ရေးမှာ အသင့်သင့်ပဲ… ချစ်သူခင်သူ ပေါပေမဲ့ တစ်ယောက်ဆို တစ်ယောက် သစ္စာ ရှိတတ်ကြတယ်..
စိတ် နာသွားရင်လည်း လှည့်မကြည့် တတ်ကြဘူး… အချစ်ကို မရူးသွပ်ဘူး.. မကိုးကွယ်ဘူး…. ဒါကြောင့် အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရမ်းကြီး မခံစားရတတ်ဘူး… စကားနည်း လေ့ရှိပေမဲ့ သူတို့ပြောချင်ရင် စက် သေနတ်ပစ်သလို တရစပ် ပြောနေလေ့ ရှိတယ် (သူတို့ ရင်းနှီးတဲ့ သူ တွေကိုပဲ).. ခပ်တည်တည် နေတတ်တဲ့ အကျင့်ကြောင့် မာနကြီးသလို အထင်ခံ ရတတ်တယ်…
မိသားစုမှာ ဝိုင်းပြီး ဂရုစိုက် ခံရတတ်တယ်.. စိတ်အရမ်းကြီးတယ် ဒါ့ကြောင့် ဒေါသကြီးတယ် လို့ ထင်ရတယ်.. သူတို့လေးတွေရဲ့ အထူးခြားဆုံး အချက်က လက်တွေ့ ဆန်ဆန် ဘဝကိုပဲ နှစ်သက်တတ်ကြတာပါ… မှန်ရင် share သွားနော်…
သငျ ဗုဒ်ဓဟူးသားသမီးကို ခဈြသူတျောမယျဆိုရငျ
ဗုဒ်ဓဟူး သားသမီးလေး တှကေတော့ အရမျး စိတျကွီးတဲ့ သူတှေ ဖွဈပါတယျ.. သူတို့လေးတှကေ ညဏျကောငျးသလောကျ အပငျြးကွီးတဲ့ သူတှလေညျး ဖွဈတယျ…. ဒါကွောငျ့ ပညာရေးမှာဖွဈဖွဈ စီးပှားရေးမှာ ဖွဈဖွဈ အောငျမွငျသငျ့သလောကျ မအောငျမွငျဘူး… ဒါကွောငျ့ အောငျမွငျဖို့ဆို ကွိုးစားအားထုတျမှု လေးတှေ ရှိမှ ဖွဈမယျ…
အမှနျတရားကို လကျ ခံတယျ.. ဒါပမေဲ့ သူတို့လေးတှေ ဆီမှာ ဘယျသူကိုမှ မပွောပွတဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြလေးတှေ ရှိနတေတျကွတယျ…. တဈယောကျထဲ နရေတာကိုပဲ သဘောကတြယျ… အပေါငျးအသငျး သိပျမရှိပမေဲ့ မိတျဆှေ ပေါတယျ…. သူတဈပါး အကူအညီ လိုရငျ ပေးတတျကွပမေဲ့ ကိုယျက သူတဈပါးဆီကို အကူအညီ မတောငျးတတျကွဘူး……. (မြား သောအားဖွငျ့ပေါ့)
ဒါကွောငျ့ အားနာကွီးတယျ လို့ ပွောရမယျ.. အနုပညာ ဝါသနာကွီးတယျ… အနုပညာ ထဲမှာမှ ဂီတကို ပိုပွီး ရူးသှပျ ကွတယျ…. တဈခါတဈလေ ကိုယျ့ကိုကို အထီးကနျြ နသေလိုမြိုး ခံစားရတတျတယျ…. အခဈြရေးမှာ အသငျ့သငျ့ပဲ… ခဈြသူခငျသူ ပေါပမေဲ့ တဈယောကျဆို တဈယောကျ သစ်စာ ရှိတတျကွတယျ..
စိတျ နာသှားရငျလညျး လှညျ့မကွညျ့ တတျကွဘူး… အခဈြကို မရူးသှပျဘူး.. မကိုးကှယျဘူး…. ဒါကွောငျ့ အခဈြနဲ့ ပတျသကျပွီး အရမျးကွီး မခံစားရတတျဘူး… စကားနညျး လရှေိ့ပမေဲ့ သူတို့ပွောခငျြရငျ စကျ သနေတျပဈသလို တရစပျ ပွောနလေေ့ ရှိတယျ (သူတို့ ရငျးနှီးတဲ့ သူ တှကေိုပဲ).. ခပျတညျတညျ နတေတျတဲ့ အကငျြ့ကွောငျ့ မာနကွီးသလို အထငျခံ ရတတျတယျ…
မိသားစုမှာ ဝိုငျးပွီး ဂရုစိုကျ ခံရတတျတယျ.. စိတျအရမျးကွီးတယျ ဒါ့ကွောငျ့ ဒေါသကွီးတယျ လို့ ထငျရတယျ.. သူတို့လေးတှရေဲ့ အထူးခွားဆုံး အခကျြက လကျတှေ့ ဆနျဆနျ ဘဝကိုပဲ နှဈသကျတတျကွတာပါ… မှနျရငျ share သှားနျော…
Author admin adminPosted on March 14, 2018 Categories ဗေဒင်Leaveacomment on သင် ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးကို ချစ်သူတော်မယ်ဆိုရင်
Author admin adminPosted on March 13, 2018 Categories ဗေဒင်Leaveacomment on စံ- ဇာဏီဘို၏ (၁၂) ရာသီဖွားများအတွက် (မတ် ၁၃ မှ ၁၉ ) ၂၀၁၈ ဟောစတမ်း